Posted by साजन खवास at 11:17 AM No comments:
शान्ति देश भनेर चिनिने नेपाल, जुन हिमाल पहाड तराइ मिलेर बनेको छ ! बिश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा भयको देशमा शान्ति का प्रतिक गौतम बुद्ध जन्मिएका थिए ! मठ मन्दिर पाटि पौवा बन जंगल हरियाली ले भरियको छ हाम्रो देश ! २०६५ साल को जनगडणा अनुसार २८८०९५२६ जनता हरुले बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ! र हाम्रो देश १४७१८१ बर्ग किलो मिटर मा फैलियको छ जहाँ १४३३५१ बर्ग किलो मिटर जमिन र ३८३० बर्ग किलो मिटर पानि ले भरिएको छ
Posted by साजन खवास at 2:03 PM No comments:
श्री गणेशाय नमो नम्:
मेरो ब्लगको पहिलो पोस्ट : टेस्टको लागि गणेश भगवानको फोटो पोस्ट गरेको छु !
Posted by साजन खवास at 11:14 AM No comments:
Labels: हिन्दु भगवानहरु